Kaydinta maxaliga ah ee CentOS 7 (muraayad) | Laga soo bilaabo Linux
brodydalle | | Aplicaciones, Isticmaal FileLet, Laga soo bilaabo Linux, Qaybinta, GNU / Linux, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Hadday sidaas tahay, halkan waxaan ku soo qaatey sida loo sameeyo muraayad CentOS 7. Waa maxay faa'iidooyinka tan? Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaad keydisaa xawaaraha internetka, waxaad haysaa nuqul maxalli ah oo ka mid ah keydadkaaga oo soo dejintooda iyo rakibistoodu aad u dheereeyaan, midka ugu weynna dhammaantood aad ayuu faa'iido u yahay sida cusbooneysiinta server haddii aad leedahay 10 server ama 1000 xarumood CentOS Waxaan u maleynayaa inay tani tahay ikhtiyaarkaaga ugu fiican maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa inaad bixiso adeeg cusbooneysiin dhakhso leh xawaaraha shabakaddaada LAN.
Hada, waxaad ka sameysan kartaa muraayaddaada ilaa 10 dariiqo laakiin waxaan kuu sheegayaa midka ay aniga ila tahay inuu yahay kan ugu dhaqsaha badan uguna raaxada badan, si fiican muraayaddaada waxaad ku sameyn kartaa qaybinta kasta oo taageerta rsync. Yesiiiiii! qofna, waxaad akhrin kartaa oo keliya qaybta rsync, samee bakhaar centOS maxalli ah oo ku yaal ubuntu, debian, fedora, redhat, slackware, dhammaantood waxay taageeraan rsync
rsync waa codsi bilaash ah oo loogu talagalay Unix iyo Microsoft Windows nidaamyada nooca oo bixiya gudbinta hufan ee xogta kororka, taas oo sidoo kale ku shaqeysa xog la duubay oo la duubay. Adoo adeegsanaya farsamaynta habka dejinta, waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku dubbarido faylasha iyo tilmaamaha u dhexeeya laba mashiin oo shabakad ah ama inta u dhexeysa laba goobood isla mashiinka, adoo yareynaya mugga xogta la wareejiyey.
Waxaan sii wadeynaa rakibida rsync
Markaad rakibto waa inaad fiirisaa liiska Muraayadaha CentOS muraayad ka mid ah meelaha kuu dhow oo la shaqeeya rsync (waa sadarka lixaad) Goobta Rsync
Abuur galka aad ku ridi karto keydka, kaliya waxaan sameeyay muraayad CentOS 7 ah, oo lagu buuxiyo isos iyo dhammaan fayllada la heli karo, oo ku fadhiyo 38 GB, marka tixgeli haddii aad sameynayso muraayad qayb ka mid ah noocyada kale ee centOS ama muraayad buuxda. Immisa boos ayey qabsan doontaa? Waa wax ay tahay inaad qiimeyso.
Bakhaarka ayaa leh dhammaan faylkan:
rsync wuxuu u shaqeeyaa sida soo socota:
Adigoo sumadda tirtiraya - lagaa reebay iyo - iskaba dhaaf waxaad iska indhatiri kartaa fayl ama feylal, tusaale ahaan feylka iso, ama feylasha .iso, sax aad u fudud?
Iyadoo xulasho leh - Tirtir, ayaa tirtiri doonta feylasha aan sii jirin isha.
-a keyd iyo kayd
-q habka aamusnaanta, wuxuu xakameynayaa fariimaha aan qaladka aheyn
-z cadaadi xogta inta lagu jiro wareejinta
-H hayso xiriirada adag, haddii aad rabto waxaan sidoo kale kugula talin lahaa ikhtiyaarka -l si loo qabto isbarasho
Sideen ku sameeyay fudud sidan:
Ha degdegin, waan kuu sharxi doonaa sababta aan sidaas ugu yeelay.
-Dib-u-cusbooneysiinta Dhig dhammaan faylasha la cusbooneysiiyey dhammaadka soo dejinta oo dhan, ma i fahantay? Taasi waa, ma cusbooneysiiyo mar kasta oo uu soo dejiyo feylal cusub, laakiin taa lidkeeda, haddii ay jireen 100 faylal cusub, ka dib dhammaadka 100 faylasha cusub, rsync iyaga meel dhig
rsync: //ftp.osuosl.org/centos/7/ maxaa yeelay waxaan kaliya doonayaa inaan sameeyo CentOS 7
/ var / www / html / repo / CentOS / 7 halka aan dhigayo dhammaan faylalka aan ka koobiyeeyo isha.
Muhiim maahan, laakiin waxaan kugula talinayaa xirmada abuuraan, si fudud waxa ay sameyso ayaa siinaya astaamaha http iyo u sameynta tusmo keydkaaga
Kadib kaliya socodso amarka tilmaamaya keydkaaga
Hada marka la dhammeeyo, waa inaad si uun u wadaagtaa, marwalba waxaan isticmaalaa server-ka http, anigoo sii wadaya CentOS 7, waxaad ku rakibi kartaa adeege shabakad aasaasi ah sida soo socota (isticmaal httpd, apache ma ahan)
Abuur xiriiriye astaan ​​ah oo ka imanaya goobta keydinta dhabta ah ee galka "www"
Waxaan abuureynaa bogagga-la heli karo iyo bogagga-karti-faylalka
Waxaan tafatirnaa feylka httpd.conf si aan ugu darno dhammaan bogagga firfircoon ee aan karti u leenahay
Kudar khadkan dhamaadka feylka
Ku dar goobaha ikhtiyaariga ah ee karti loo siiyay / *. Conf
Waxaan abuurnaa oo tafatirnaa degelkeena
Magaca Serverka repocentos.com
CustomLog /var/log/httpd/requests.log oo la isku daray
Waxaan u hawlgelineynaa boggeena annaga oo abuurayna isku xirnaan calaamadeysan
Waxaan ku bedeleynaa milkiilaha iyo kooxda feylasha iyo faylalka qafis
Waxaan fulineynaa amarka soo socda si markaa shabakadda shabakaddu u bilaabato isla markii aan bilownay mashiinka
Waxaan dib u bilaabi doonaa adeegaha shabakada amarka soo socda
Sideen u isticmaali karnaa?
Abuur fayl ku jira /etc/yum.repos.d/local.repo oo ku dhaji khadadka soo socda:
[os] magac = master - Base baseurl = http: //ip ama url/ repo / CentOS / $ sii daayaha / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = faylka: /// iwm / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [cusbooneysiin] magac = sayid - Cusbooneysiinta baseurl = Https: //ip ama url/ repo / CentOS / $ sii daayaha / cusbooneysiinta / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = faylka: /// iwm / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [siyaado] magac = master - Extras baseurl = Https: //ip ama url/ repo / CentOS / $ releasever / extras / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [centosplus] name = master - CentosPlus baseurl = Https: //ip ama url/ repo / CentOS / $ sii daayaha / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = faylka: /// iwm / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Waxaan ku cusbooneysiineynaa goobaha keydka:
Hagaag taasi waa markan. Had iyo jeer xusuusnow inaad si dhow ula socoto qoraalkeyga iyo degelkan. Faallo iyo sidaa darteed dhammaanteen waxaan wadaagnaa aqoonteenna, illaa waqtiga soo socda !!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Kaydinta maxaliga ah ee CentOS 7 (muraayad)
Centos miyay ku habboon tahay in lagu isticmaalo kumbuyuutarka kumbuyuutarka kumbuyuutarka isticmaala? Mise waa kheyraad la qasaaray? Waxaan ku tijaabinayay Live-usb oo runtii waan ka helay.
Waa mid aad u deggan, runtiina waa ikhtiyaar wanaagsan. Waad ku mahadsantahay faalladaada
Gacaliye elendilnarsil waxaad u isticmaashaa Fedora isticmaalaha ugu dambeeya ee leh centos waa inaad wax badan shaqeysaa waana server aad u deggan.
Awooddu way awoodaa. Laakiin looguma talagalin kombiyuutarrada isticmaalayaasha caadiga ah.
Ha la yaabin haddii Wifi ama qaar ka mid ah kuwa aanan garanaynin, kamaradda webka, (maaddaama ay ku jiraan darawallada in ka badan wax kasta oo server adag), in repo-ga uusan jirin wax xirmo ah oo aanan garanayn, koodhadhyo, qalabaynta xafiiska, ama wax la mid ah, ama in baakadaha ay duug yihiin (laakiin deggan sidii birta)
Kuma raacsani adiga, waxaa jira keyd rasmi ah oo ujeeddadan ujeeddadeedu tahay, sida epel iyo nux https://wiki.centos.org/TipsAndTricks/MultimediaOnCentOS7
U gudubka maqaalka, aad u fiican !!
Markaad haysato kumbuyuutarro tiro badan oo Linux ah, rakibiddu aad ayey u dhakhso badan yihiin uguna waxtar badan yihiin.
waa sax, waad ku mahadsantahay faalladaada
Waad salaaman tihiin asxaabteyda, miyaan joojin karaa oo dib uma bilaabi karaa soo dejinta repo? sii wad meeshii aan ka tegey?
Ku jawaab Alexmanafan
shaki saaxiib, sidaan ugu cuno repo-ka http, taasi waa, ka eeg qaab-dhismeedka repo-ka httpd
http://172.16.1.9 Waxaan helaa bogga qafiska laakiin waxaan rabaa inaan dhigo http://172.16.1.9/??? si aad u aragto qaab dhismeedka http.
Waxaan u baahanahay inaan weydiiyo su'aal shaki ah oo soo ifbaxay ...
rsync -avzqlH –delete –delay-Updates rsync:…. Xitaa waa caadi laakiin maahan inaan dhigo halka hadhow lagu koobiyeyn doono?
Tusaale ahaan: rsync -avzqlH –delete –delay-updates rsync:…. / orod / warbaahin / miuser / Xog / keyd / xarun / centos7 / 7 /
Ku jawaab Odnamra
Daniel Morales sawir-haye dijo
Gacaliye galab wanaagsan
Anigoo ka raadinaya macluumaad Webka Waxaan helay buugan xiisaha leh ee aad qortay, Hambalyo taas. Su'aashaydu waxay soo ifbaxday maxaa yeelay waxaan rabaa inaan abuuro Muraayad leh dhowr qaybood oo Linux ah, Centos, OracleLinux, Debian, dhammaantoodna leh noocyadoodii ugu dambeeyay ee aan ku rakibo shirkadda. Laakiin sidee baan u sameysan karaa isla muraayadda loo yaqaan 'mirror muraayad' oo loo qeybiyo dhowr nooc iyo noocyo? Miyaan abuuraa fayl kale oo leh magaca qaybinta iyo wixii la mid ah? Meelahan keydka ah si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiiyaa mise waa inaan ku ordaa amar marwalba marwalba? U fiirso faallooyinkaaga. Maalin farxadeed
Kujawaab Daniel Morales